Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:Husiku Chiono Rear View,1080 Wifi Mota Kamera,Negadziriro yeparutivi Camera System Wireless
Home > Products > Wireless Backup Kamera Systems > Wireless Backup Kamera System > kumashure kuona yedhijitari isina waya mota reverse kamera
Yokupaka Yekutungamira Kamera Uye Monitor
Iyo yekuchengetedza kamera screen kititi inogona kukupa iwe yakajeka kumashure maonero ekutyaira kwako.
Yakazara ruvara TFT LCD kuratidza, Yakaderera simba yekushandisa.
Kupaka yekutarisa kumashure, yekutarisa ichatanga otomatiki, uye synchronously kuratidza vhidhiyo kubva kumashure kamera kamera kana iwe uchitsigira mota yako.
Iyo yekutarisa ichavhara yega mushure mekutsigirwa. Mifananidzo inocheka kutarisisa kamera pakarepo paunenge uchitsigira mota uye wozodzokera kumashure ekutanga kumashure mushure meizvozvo.
Inotsigira Car Kamera, DVD, VCD, STB, Satellite inogamuchira, uye mimwe michina yevhidhiyo.
Yakagadzirirwa menyu mabhatani, iwo kupenya / kusiyanisa / hue / mutauro unogoneka.
Iine 2 mugwagwa vhidhiyo yekuisa chiteshi, chena vhidhiyo tambo inosangana kune mota kumashure kamera, yeyero inobatana neDVD kana VCD, White vhidhiyo tambo ndiyo yekutanga chiratidzo yekuisa, kana 2 mugwagwa uine chiratidzo chekuisa, muchina unoisa pamberi chena magumo chiratidzo.
Hapana Audio yekuisa kana kuburitsa.
Rinofambisa uye rinogamuchira:
Tora mineti imwe tora kamera yako ive isina waya kamera.
Chinja chero inodzosera kamera ine yakajairwa phono / RCA chinongedzo kuita isina waya kamera neiyi yepasirese transmitter uye inogamuchira kit.
Inobvisa kudiwa kwekumhanyisa tambo kureba kwemotokari, ingo batanidza inoshambadzira payo kamera kamera uye inogamuchira kumagumo ekutarisa.
Iyo yekutepfenyura zvakare inosanganisira inopfuura kupfuudza kune iyo simba kuti iwe ugone kuisanganisa iyo zvinoenderana neako kamera.
Wireless mugamuchiri nemurume phono plug yekubatanidza kuongorora.
Inobatanidza kune yekumashure-yekutarisa kamera uye kumberi vhidhiyo skrini.
1080 Wifi Mota Kamera
Negadziriro yeparutivi Camera System Wireless
1080 Husiku Chiono
Mota Tamba Husiku Chiono